Dhanieri Anoprofita nezveUmambo hwaMwari Ari muBhabhironi | Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Chiyao Chol Croatian Czech Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Faroese Finnish French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Irish Italian Japanese Kabyle Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Romany (Southern Greece) Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Muprofita Ari Muutapwa Anoratidzwa Ramangwana Muchidimbu
Dhanieri anoprofita nezvoUmambo hwaMwari uye nezvokuuya kwaMesiya. Bhabhironi rinowa
DHANIERI, wechiduku akanga akaperera zvinoshamisa akaendeswa kuBhabhironi senhapwa Jerusarema risati raparadzwa. Iye nevamwe vaJudha—nhapwa dzokuumambo hweJudha hwakanga hwaparadzwa—vakapiwa karusununguko nevakanga vavatapa. Paakararama kwenguva refu muBhabhironi, Dhanieri akakomborerwa zvikuru naMwari, akatopukunyuka rufu mugomba reshumba uye akaratidzwa zvinhu zvakaita kuti azive zvaizoitika mune ramangwana. Uprofita hwaDhanieri hunonyanya kukosha hwaitaura nezvaMesiya uye kutonga kwake.
Dhanieri anoudzwa kuti Mesiya aizosvika rini. Dhanieri akaudzwa kuti vanhu vaMwari vaizotarisira rini kusvika kwa“Mesiya Mutungamiriri”—vhiki 69 dzemakore pashure pemurayiro wokudzorera uye kuvakazve masvingo eJerusarema. Vhiki yatinoziva ine mazuva manomwe; vhiki yemakore ine makore manomwe. Murayiro iwoyo wakabudiswa nguva refu Dhanieri afa, muna 455 B.C.E. Kubvira ipapo, “vhiki” 69 dzakaita makore 483, dzichizoguma mugore ra29 C.E. Muchikamu chinotevera chebhurocha rino, tichaona zvakaitika gore iroro. Dhanieri akafanoonawo kuti Mesiya ‘aizourayiwa,’ kuitira kuyananisa chivi.—Dhanieri 9:24-26.
Mesiya aizova Mambo mudenga. Mune zvaakaratidzwa zvisina kujairika nezvedenga pacharo, Dhanieri akaona Mesiya, anotaurwa so“mumwe munhu akafanana nomwanakomana womunhu,” achisvika pachigaro choumambo chaJehovha pachake. Jehovha akamupa “ushe nokukudzwa noumambo.” Umambo ihwohwo hwaizoramba huripo nokusingaperi. Dhanieri akaudzwa zvimwe zvakawanda zvinonakidza nezvoUmambo hwaMesiya—Mambo wacho achava nevamwe vaanotonga navo, boka rinotaurwa se“vatsvene vaIye Mukurusa.”—Dhanieri 7:13, 14, 27.
Umambo hwacho huchaparadza hurumende dzenyika ino. Mwari akaita kuti Dhanieri akwanise kududzira chiroto chakavhiringidza Nebhukadhinezari, mambo weBhabhironi. Mambo akanga aona chifananidzo chihombe chaiva nomusoro wendarama, chipfuva nemaoko zvesirivha, dumbu nezvidya zvemhangura, makumbo esimbi, uye tsoka dzesimbi yakasanganiswa neivhu. Dombo rakacherwa kubva mugomo rakarova tsoka dzacho dzakanga dzisina kusimba ndokuparadza chifananidzo chacho chikaita kunge upfu. Dhanieri akatsanangura kuti zvikamu zvechifananidzo chacho zvaimiririra kutevedzana kwemasimba enyika, kutanga neBhabhironi richimiririrwa nomusoro wendarama. Dhanieri akafanoona kuti munguva yesimba rokupedzisira raizotonga nyika ino yakaipa, Umambo hwaMwari hwaizoita chimwe chinhu. Hwaizoparadza hurumende dzose dzenyika ino. Zvadaro, hwaizotonga nokusingaperi.—Dhanieri, chitsauko 2.
Dhanieri akanga achembera zvikuru uye akararama ndokuona kuwa kweBhabhironi. Mambo Koreshi akakunda guta racho sezvakanga zvafanotaurwa nevaprofita. Pasina nguva, vaJudha vakanga vazosunungurwa kubva muutapwa—panguva chaiyo, pashure pokunge nyika yokumusha kwavo yaita makore 70 iri dongo sezvakanga zvafanotaurwa. Vachitungamirirwa nemagavhuna, vapristi, uye vaprofita vakanga vakatendeka, vaJudha vakazovakazve Jerusarema uye vakavakazve temberi yaJehovha. Zvisinei, chii chaizoitika pakupera kwemakore 483?
—Kubva mubhuku raDhanieri.
Dhanieri akaudzwa chii nezvaMesiya uye Umambo hwaMwari?
Umambo hwaMwari hwaizoitei kuhurumende dzenyika ino?
Kana uchiziva mhinduro yacho, unogona kuitsanangurira mumwe munhu here uchishandisa Bhaibheri?